Guerrilla मार्केटिंग एजेन्सी caveman अभियानहरु सुर्खियों गर्दै छन्
सामग्रीमा सिधा जानुहोस्
परिष्कृत गुरिल्ला मार्केटिंग र विशाल मूर्तिकलाहरू काभम्यान अन्तर्राष्ट्रियद्वारा
हामी पहिलेका सबै एजेन्सीहरू भन्दा चलाख, अधिक परिष्कृत, र अझ बढी आक्रामक छौं। हामी तपाईंको ग्राहक संग एक अविस्मरणीय कनेक्शन बनाउन।
CSR कर्पोरेट उत्तरदायित्व
गुफाम अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा स्वागत छ!
MyToys का लागि ठूला मूर्तिकलाहरू र छापामार मार्केटि concept अवधारणा
मा स्वागत छ Caveman Internationa एजेंसीl, हामी प्रख्यात ग्राहकहरू जस्ता हेरचाह गर्छौं स्पोटिफाई, विकिपेडिया र MyToys क्षेत्रमा गुरिल्ला मार्केटिंग. कर्पोरेट उत्तरदायित्व हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण छ, यसैले हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई समर्थन गर्दछौं मानव अधिकार र विकास सहायता को लागी संगठनहरु.
जाडो गुरिल्ला मार्केटिंग ODLO को लागि डेटलेफ डीको साथ! म्युनिकमा
क्यापिटल ब्रा आफ्नो नयाँ एल्बम पुनः लन्च गर्न जर्मनीको सब भन्दा भव्य भूमिगत भूमिगत छापाखाना एजेन्सीको खोजीमा थिए। बर्लिनमा फ्ल्याश भीडहरू, कार चालुबाट हल्का अनुमानहरू र बढ्दो वृद्धि। विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले हाम्रो प्रयासहरूको रिपोर्ट गरे।
एक एनजीओको लागि लन्डनमा ब्रिटअर्डर्समा लाइभ टिभी कार्यक्रम ह्याकको बेला भिडियो प्रोजेक्शन
हरियो मार्केटिंग। २००ave पछि जर्मनीमा कलाकारहरूसँग रिभर्स ग्र्याफिटी र स्ट्रीट ब्रान्डि offer्ग प्रदान गर्ने पहिलो विज्ञापन एजेन्सी क्याभम्यान अन्तर्राष्ट्रिय हो। काई लोगो, काई ब्यानर, काई मूर्तिकला, काई संकेत, सबै सम्भव छ! काई आदर्श रूपमा प्रक्रिया गर्न सकिन्छ र एक सानो सावधानी संग यो तपाइँको मेला मा धेरै हरियो रहन्छ।
हामीले एक पहिल्यै प्रख्यात प्रभावशाली साथ पहेंलो डिस्कोन्टरको भ्रमण गर्यौं। असुरक्षित चयन।
Badenova AG अगस्त २०१ 2019 को लागि परियोजना: मौसम परिवर्तनले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याउँछ!
गुरिल्ला मार्केटिंग - न्यूनतम लगानीको साथ अधिकतम पहुँच र ग्राहकहरूको उच्च स्तरको सुरक्षाको कला हो।
हाम्रो SnowOnDemand विशेष फोमको साथ, ध्यान तपाईंको विज्ञापनमा केन्द्रित छ। गैर पिघलने कृत्रिम हिउँ ध्यान आकर्षित गर्नका लागि उत्तम छ।
हामी तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा भाइरल मार्केटिंग र वैकल्पिक गुरिल्ला विज्ञापन को विषयको सल्लाह दिन खुसी हुनेछौं। हाम्रो छापा मार्केटिंग विज्ञापन एजेंसी सीधा कल गर्नुहोस्!
बिक्री सोम - शनिबार बिहान १० - p बिहान .: +। 2131 4058-629
24H हटलाइन: + 49 163 71 666 23
कल्पना गर्नुहोस् मराथन ध्वनि डनर
पिक्सेल सहयोगी अफ्रीकामा व्याख्या भिडियो गोली
सँधै करीवर्स्ट। सँधै पोस्टर विज्ञापन बुक गर्नुहोस्। जहिले पनि उस्तै हेर्नुहोस् ...
हामी Caveman मा ग्यारेल मार्केटिंग एजेन्सी को रूप मा दृष्टि छ।
वर्महोल को बारे मा, एक अन्य आकाशगंगा को बारे मा सोचें, फिर्ता तपाईंको उत्पादन मा, र संधै हाम्रो रचनात्मक जीवन लाई जोखिम मा राखयो।
हामीले प्रस्ताव गर्ने संक्षिप्त विवरण प्राप्त गर्न कृपया हाम्रो एजेन्ट पोर्टफोलियो डाउनलोड गर्नुहोस्। कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Caveman गुरिल्ला मार्केटिंग बजार मा सबै भन्दा राम्रो पनडुब्बी विशेष एजेन्सीहरु मध्ये एक हो। हामी सामान्यतया काम गर्छौं
गुरिल्ला र ट्रोजन मार्केटिङ क्षेत्रमा ठूलो सञ्जाल एजेन्सीहरूको लागि गुप्तिकरण, हामी पनि राजनीतिक अभियान चलाउछौं
एक गुरिल्ला मार्केटिंग विज्ञापन एजेन्सी को तरिका
जे। सी। लेविन्सनले 80 वर्षमा गुरिल्ला मार्केटिंगको नियमहरू सिर्जना गरे। Caveman अन्तरराष्ट्रीय, पनि, यी महत्त्वपूर्ण नियमहरूमा आफूलाई प्रतिबद्ध छ र यसैले प्रेरणादायक विज्ञापन प्रोजेक्टहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको ग्राहकको सबै इंद्रमा अपील गर्दछ।
ग्यारिडा मार्केटिंग तपाईंको दिमाग को ध्यान मा राख्छ। टीकेपी, सीपीसी जस्तै विज्ञापन उद्योगको क्लासिक मापदण्ड विवादास्पद प्राप्त गर्न उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ।
ग्यारेला बजारले तपाईंलाई आफ्नो प्रतियोगितालाई सीधा आक्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै प्रतिस्पर्धीले ग्यारेला मार्केटिङको विभिन्न हातको उपकरणसँग निश्चित छ।
एक व्यक्तिगत स्पर्शले हाम्रो एजेन्सीको अभियानलाई चित्रण गर्छ।
FÜHR कसम विपणन
विज्ञापन पट्टि बाहिर निकाल्नका लागी अभियानहरू सकारात्मक समूहमा लक्षित समूहमा आइपुगेको हुनाले तपाईंको विज्ञापन अभियानलाई धेरै साथीहरु र परिचित हुन सक्दछ।
ग्यारिडा मार्केटिङ स्पेस सिर्जना गर्दछ तपाईका लक्षित श्रोताहरूलाई सिधै तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। चाहे आउटडोर पूल मा, कन्सर्ट मा या एक विकल्प मा।
ग्यारेला बजारले मानिसहरूलाई भावनात्मक बनाउँछ र तपाईंको ब्रान्ड लेबलको लागि ध्यान सिर्जना गर्दछ।
हामी शक्तिशाली अभियानहरूमा हामीका लागि हाम्रो कार्यहरू सङ्कलन गर्छौं।
सबै एजेन्सीहरू र अन्तिम ग्राहकहरूले हालका मुद्दाहरूमा तुरून्त प्रतिक्रिया दिनको लागि २ave/ contact सम्पर्कमा गुफामान अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्पर्क राख्छन्। सुपरबोबलको बारेमा ट्वीटर विज्ञापन हो कि होइन; वा मिडिया बुकिंग महत्त्वपूर्ण TV कार्यक्रमहरूको लागि। हाम्रो एजेन्सी तपाइँको विज्ञापन उपस्थितिको ख्याल राख्दछ र विश्वव्यापी प्रसिद्ध नेटवर्क एजेन्सीहरु संग नियमित रूप मा काम गर्दछ। हाम्रो पोर्टफोलियो प्रस्तावहरु:
Viral भाइरल विचार र अभियानहरूको विकास
Europe युरोपमा अनावश्यक मिडिया मार्केटिंग
Digital डिजिटल ठूलो स्क्रिन बमोजिमहरूको प्रयोग एनालग
∴ लाइट मार्केटिंग र लाइट आर्ट
∴ वायरल मार्केटिंग
∴ ट्रोजन मार्केटिंग
Houses घरहरू र गतिशील वस्तुहरूमा थ्रीडी म्यापि।
Otion पदोन्नति र असामान्य स्थानहरूमा
∴ मौसम बेलून क्यामेरा मक्खी
∴ रेनर्टाइजिंग र दबाव वाशर रिभर्स ग्राफिटी
Ase लेजर विज्ञापन र इन्द्रेणी लेजरहरू
∴ Flyvertising र अन्य उडान वस्तुहरु को समूहहरु मा बैनर ओवरफ्लैट को लागि
∴ फ्लोर स्टिकर, कलाकारले डिजिटल द्वारा 3D फ्लोर वस्तुहरूको लागि
∴ स्ट्रीट कला द्वारा प्रसिद्ध फ्लोबल कलाकारहरू
∴ चक ग्रिफी या फर्श स्टेंसिल स्टेन्सिल
∴ पिक्सेल स्टिकर र पन्नी जो सबै सतहहरु जस्तै घर को पर्खालहरु मा चिपकन्छ
हाम्रो विज्ञापन एजेन्सीद्वारा विकास सहित ∴ स्ट्रिबब्रिङ
Gra ग्राफिटी र सडक ब्रान्डिंग रिभर्स गर्नुहोस्
Social सामाजिक सञ्जालका लागि भावनात्मक अभियान
∴ सामाजिक विज्ञान
Outdoor आउटडोर विज्ञापन र पोस्टरहरूको लागि वाल एजी र स्ट्रोअर सेवासँग सम्झौताहरू मार्फत
Party पार्टी संगठन र उडान सेवा संग विश्वविद्यालय मार्केटिंग
Industrial औद्योगिक विकासका सबै क्षेत्रका लागि गुरिल्ला मार्केटिङ
∴ तल-मार्केटिंग मार्केटिंग अभियान
∴ मोबाइल फोम पार्टीहरू र घटनाहरू र कन्सर्टहरूका लागि हिउँका पक्षहरू
∴ फ्ल्याश मोब र सार्वजनिक गुप्त कन्सर्टहरू
3D म्यापिङ लाइट प्रोजेक्शन साबरब्रुकन
सबैभन्दा लामो रोल पोस्टर संसारमा
Caveman अन्तरराष्ट्रीय एक छ पूर्ण सेवा तल-द-लाइन विशेषज्ञ एजेन्सीत्यो हुन जान्छ दोस्रो चरण मा राजनीतिक अभियान माहिर। कोर क्षमता अवधारणा र कार्यान्वयन हो गुरिल्ला मार्केटिंग र परिवेश मार्केटिंग उपायहरू, प्रचारहरू, कार्यक्रमहरू, प्रोत्साहनहरू र नमूनाहरू।
प्रकाश कला र पृष्ठभूमि घटनाहरू अन्तर्क्रियात्मक प्रकाश प्रतिष्ठानहरू हाम्रो महान जुनून मध्ये एक हो।
क्षेत्रमा चुनाव प्रचार गुरिल्ला मार्केटिंग एजेन्सीको रूपमा हामीले नयाँ मैदान तोडिरहेका छौं। उदाहरणका लागि चुनावहरू: चुनाव जति नजिक हुँदै जान्छ, त्यति नै अधिक महत्त्वपूर्ण आश्चर्यजनक कार्यहरू छन्चुनाव अभियानमा सुपरसेसर भएको मतदाता पुग्न र लागि आफ्नो लक्ष्य जित्नको लागी, अगाडिल्लो सञ्चार कार्यक्रम र सतही आवेदन एक पटक, बुद्धिमानी थिए विचारशील र अचम्मलाग्दो ग्यारेल रणनीतिहरु कला को स्थिति हो - र हाम्रो मुख्य क्षमता को रूप मा Guerilla Marketing Special Agency
ग्यारेला मार्केटिंग विज्ञापन एजेन्सी
असामान्य मान्छे असामान्य दृश्यहरू प्रदान गर्नुहोस्। विभिन्न मानिसहरू त्यो प्रयोग गर्नुहोस् पुरा स्पेक्ट्रमत्यो मार्केटिंग को प्रस्ताव छ। एक हरी के हुन्छ, अर्को अर्को भन्दा टाढा छ। एक को लागि के looker हो, केवल अर्को यान बनाउँछ। एक अराजकता भन्छन्, अर्को उत्कृष्ट। 40 क्रिएटिव विज्ञापन टाउको यकीन गर्नुहोस् कि आँखा पशु मानिसहरूमा संबोधित गरिएको छ।
ढिलो समझौता तर हार्ड-जीभ अवधारणाहरू र समाधानमा छलफल निश्चित गर्नुहोस् कि हाम्रो कार्यहरू हो कल्पना र सपना दर्शकहरूलाई अपील गर्न। हाम्रो लक्ष्य हो विशिष्टताको, हाम्रो लक्ष्य यो सुनिश्चित गर्न को लागी सबै को लागी छ कि हाम्रो काम को यो साझा गर्न चाहन्छ कि देखेको छ। हामी आफ्नो विचारहरु कि यथार्थसम्मको लागि फोकस गर्दछौं मूल कुराहरुअदृश्य नभएसम्म तर स्पष्ट हल्का आउछ।
यसबाट वर्ष 2000 मा स्थापित उनीहरू लडिरहेका थिए विशेषज्ञहरु को अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेला मार्केटिंग विज्ञापन एजेन्सी Caveman आधुनिक समयको आधुनिक आधुनिक र असामान्य परियोजनाहरू - को लागि प्रसिद्ध ग्राहकहरू अगाडी नीदरल्याण्ड, मोरक्को र जर्मनीमा।
एम्बिएन्ट मार्केटिंग खेल
लेनर, प्रोक्टर र गैम्बलेटको लागि विज्ञापन ड्रोनहरू
हल्का अनुमानहरू बारको रातो रातो रात
IFA को निष्पक्ष गुरिल्ला कार्रवाई को प्रसारण
2020 २०२०	परिष्कृत गुरिल्ला मार्केटिंग र विशाल मूर्तिकलाहरू काभम्यान अन्तर्राष्ट्रियद्वारा
शीर्षमा ↑	होच ↑